Fitsaboana valanaretina :: Sitrana tanteraka ilay mpilomano sy ny ankohonany • AoRaha
Fitsaboana valanaretina Sitrana tanteraka ilay mpilomano sy ny ankohonany
Afa-doza. Niverina amin’ny fahasalamana tanteraka Rakotondrainibe Harivola Marie Sarah, mpilomano kalaza fahiny, rehefa avy nolazoin’ny valanaretina Covid-19. Nambarany fa « sitrana tanteraka izy telo mianaka », izay samy nisafidy ny hitsabo tena tany an-tokantranony. « Ny vavaka sy ny fitsaboana nataon’ny mpitsabo, izay rahavaviko ihany, no nahasitrana anay », hoy ity tale teknika nasionalin’ny lomano malagasy teo aloha ity.
Tamin’ny 15 jona 2020 no nanomboka nisy soritr’aretina izy, araka ny fitantarany, ka ny 20 jona vao nanao fitiliana. Ny 28 jona no nivaly fa mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 ilay renimpianakaviana. Nanomboka niharatsiratsy ny toe-pahasalamany, tamin’io andro io hatramin’ny 1 jolay. Nanapa-kevitra ny nihiboka sady nitsabo tena tao an-trano izy telo mianaka, satria efa naneho soritr’aretina ihany koa ny vadiny. Kohaka kely fotsiny kosa no niseho tamin’ny zanany, araka ny fitantarany hatrany.
« Fifangaroana fanafody avy amin’ny mpitsabo sy ireo fitsaboana nentim-paharazana ary ny vavaka sy ny tohana ara-tsaina nataon’ireo namana no nitondra anay amin’izao fiverenan’ny fahasalamana izao, ankehitriny. Isaorana ireo rehetra nanohana anay, indrindra ireo nivavaka ho anay », hoy hatrany ity mpilomano kalaza ity